‘शत्रुगते’ टिमले साट्यो खुसी,‘रुपै मोहनी’लाई १ करोड…. | Radio Langtang 90.3 Mhz
‘शत्रुगते’ टिमले साट्यो खुसी,‘रुपै मोहनी’लाई १ करोड….
युट्युवमा अपलोड भएको दुई महिना नपुग्दै फिल्म ‘शत्रु गते’ मा समावेश ‘रुपै मोहनी’ गीतलाई एक करोड पटक हेरिएको छ। गत डिसेम्वर २९ तारिखमा अपलोड गरिएको गीतको भिडियोलाई फेब्रुअरी २२ तारिखमा एक करोड भन्दा बढी पटक हेरिएको हो।
उक्त अवसरमा फिल्मका कलाकारहरु दीपक राज गिरी , दीपाश्री निरौला , शिवहरी पौडेल , पल शाह , आँचल शर्मासंगै प्रस्तुतकर्ता किरण केसी र निर्देशक प्रदीप भट्टराई पनि उपस्थित थिए ।
फिल्ममा हरिवंश आचार्यको कथा रहेको छ । पटकथालाई निर्देशक भट्टराई र दीपकराज गिरी तथा संवाद भने निर्देशक भट्टराईले कथाकार हरिवंश आचार्यसंग मिलेर तयार गरेका हुन् । यसमा छायाँकन दिर्घ गुरुङको रहेको छ भने सम्पादन मित्र गुरुङले गरेका हुन् । यसमा दीपकराज गिरी , दीपाश्री निरौला , नरेन्द्र कंसाकार , शिवहरी पौडेल , यसोधा श्रेष्ठ र रमिला आचार्य निर्माता रहेका छन् । फिल्म चैत्र ९ मा रिलिज हुनेछ ।
शिक्षामा टालटुले सुधारले परिवर्तन सम्भव छैन : प्रचण्ड
यतिबेला नेपालका थुप्रै गायक तथा गायिकाको व्यस्तता स्टेजमा छ । एल्बम वा म्यूजिक भिडियो बनाएर कमाई खासै नभएपनि त्यही गीत ...
झापा मंसिर ९ ,नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दमकस्थित घरमा आज बिहान करिब ४ बजे बम विष्फोट भएको छ । दमक नगरपालिकाका प्रमुख ...